Jeenyo oo dhigatay xaflad ay ugu dabaal dageyso koobka Janeraal Daa’uud. – Cayaaraha dunida
Jeenyo oo dhigatay xaflad ay ugu dabaal dageyso koobka Janeraal Daa’uud.
Kooxda Jeenyo United ayaa xaflad si heer sare loo soo aggaasimay ugu dabaal degtay hanashada koobka koobabka ee Janeraal Daa’uud oo ay ku guuleysatay toddobaadkii aynu soo dhaafnay.
Xafladaan oo ka dhacay Liido Sea Food, ayaa waxaa kasoo qayb galay masuuliyiin ka socda xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta, guddoomiyayaasha kooxaha heerka koowaad ee dalkeena, halyeeyo horay u soo maray kooxda Jeenyo, Macalimiin , Ciyaartooy qaran iyo taageerayasha kooxda Jeenyo.
Guddoomiyaha kooxda Jeenyo Jubba Ciise ayaa furay munaasibadda maanta ka dhacday Liido Sea Food, waxaana kaddib halkaasi laga jeediyay qudbado dhiiro galin ah.
Gudoomiye Ku xigeenka koowaad ee XiriirkaSoomaaliyeed kubada Cagta Cali Cabdi Maxamed (Cali Shiine) oo ka hadlay munaasibadda ayaa ugu hambalyeeyay kooxda Jeenyo hanashada koobka Janeraal Daa’uud, isagoo ku dhiiro galiyay xiddigaha Jeenyo in ay sii wadaan dadaalkooda.
Sidoo kale xoghayaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubada Cagta Xasan Maxamed Maxamuud (Farey) oo ka hadlay goobta ayaa sheegay in xiriirka SFF ay ku faraxsan yihiin in ay kasoo qeyb galaan dabaal degga kooxda Jeenyo iyo dhiiro gellinta ciyaartooyda, isagoona ugu dambeyn ugu hambalyeeyay kooxda koobkii ay ka qaaday Banaadir.
Cantar Jeenyo oo ah xiddig horay u soo maray kooxdaan, ayaa ku amaanay ciaayrtooyda naadiga u ciyaara wax qabadkooda, isagoona ugu baaqay in ay sii laba jibaaraan.
Guddoomiyaasha kooxaha Heegan iyo Dekedda ee Diyeeshe dheere iyo C/laahi Faarax ayaa si isugu mid ah ugu hambalyeeyay kooxda Jeenyo mahadaama ay noqotay kooxdii ku guuleysatay koobka Janeraal Daa’uud.
Ugu dambeyn xiddiga garabka weerarka kooxda Jeenyo ee Maxamuud Cabadi Nuur ( Meyman) ayaa shahaado sharaf ka helay guddoomiyaha taageerayaasha kooxda Jeenyo Rijaal Xasan Axmed kaddib wax qqabadkii kooxda.
Sikastaba Jeenyo ayaa toddobaadkii aynu soo dhaafnay ku guuleysatay koobka Janeraal Daa’uud, markii ay riggoorayaal 4-1 ku garaacday kooxda Banaadir.